Kiisaska iPhone 7 iyo 7 Plus waxay la jaan qaadayaan iPhone 8 iyo 8 Plus | Wararka IPhone
Cusboonaysiinta muddada dheer la sugayay ee iPhone 7 iyo 7 Plus ayaa nooga tagtay dhadhan beero. IPhone-ka cusub 8 iyo 8 Plus waxay leeyihiin naqshado aad u yar oo kala duwan haddii aan isbarbar dhigno qaabkii hore, iPhone 7 iyo 7 Plus. Muraayadda gadaal ayaa ah waxa ugu cusub ee bilicsanaanta ay na siiso, maaddaama labada kamaradood ee labada ah ee iPhone 8 Plus iyo kuwa iPhone 8 ay weli ku jiraan meel isku mid ah.
Haddii aad tahay aruuriyaha daboolkaSida akhristaheena Ivan Silva ee reer Mexico yahay, oo aad ku fikirayso inaad cusboonaysiiso qalabkaaga iPhone 7 ama 7 Plus ee cusub ee iPhone 8/8 Plus, waad ku kalsoonaan kartaa inaad awood u yeelan karto inaad ku sii raaxeysato dhammaan daboolida aad iibsatay intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay dhib la'aan.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Apple waxay bilowday inay soo ceshato tiro badan oo dabool ah oo midabbo kala duwan lehs, taas oo calaamad cad u noqon karta in iPhone-ka cusub ee 8-da iyo 8-da ah uusan sii wadi doonin inuu u adeegsado naqshad isku mid ah iPhone 6 iyo 6 Plus, xoogaa kala duwanaansho yar, laakiin marka moodooyinka cusub la soo bandhigo, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in sababta dib loogula noqday ay noqon karto iib yar.
Haddii aan booqanno kiisaska cusub ee Apple soo bandhigtay markii la bilaabay iPhone 8 iyo 8 Plus, ha moogaanin fursad, waan arki karnaa sida dhammaan Kiisaska la jaan qaadaya iPhone 8 iyo 8 Plus waxay la jaan qaadayaan iPhone 7 iyo 7 Plus. Iyada oo loo marayo Apple Store Online, Apple waxay na siisaa dhammaan noocyada daboolka, oo leh dhammeystirro kala duwan, qalab ... sidaa darteed haddii aynaan si cad u caddayn nooca nooca daboolka ah ee aan raadineyno, socod ku dhex marno dukaanka Apple dhab ahaan waan ka bixi doonnaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kiisaska IPhone 7 iyo 7 Plus waxay la jaan qaadayaan iPhone 8 iyo 8 Plus
Sawirka meeleynta Antonio Morales dijo
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay, sababtoo ah horeyba waxaa u jiray noocyo badan, midabbo iyo qaabab kala duwan oo Iphone 7 iyo 7 Plus ah.
Ku jawaab Antonio Morales
Waxaan tijaabinay hadalka 'Bluetooth' ee Aukey SK-S1: wanaagsan, quruxsan, oo raqiis ah
Codsiga Clips wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku abuurnno muuqaallo muuqaal leh kamaradda TrueDepth ee iPhone X